Mpanamboatra sy mpamatsy kojakoja granita - Ozinina kojakoja granita any Sina
Fivoriambe Granite ho an'ny X RAY & CT
Tobin'ny milina granita (Rafitra Granite) ho an'ny CT sy X RAY indostrialy.
Ny ankamaroan'ny fitaovana NDT dia manana rafitra granita satria ny granita dia manana fananana ara-batana tsara, izay tsara kokoa noho ny metaly, ary afaka mamonjy ny vidiny.Manana karazany maro isikafitaovana granita.
ZhongHui dia afaka manamboatra fandriana milina granita isan-karazany araka ny sarin'ny mpanjifa.Ary azontsika atao koa ny manangona sy manitsy ny lalamby sy ny visy baolina amin'ny fototra granita.Ary avy eo manolotra tatitra fanaraha-maso manam-pahefana.Tongasoa eto amin'ny fandefasana ny sary ho an'ny fangatahana teny nindramina.
Tobin'ny milina granita ho an'ny fitaovana semiconductor
Ny miniaturization ny indostria semiconductor sy ny masoandro dia mandroso tsy tapaka.Mitovy amin'izany ihany koa, mitombo ihany koa ny fepetra takiana mifandraika amin'ny dingana sy ny fametrahana mazava tsara.Ny granita ho fototry ny singa milina amin'ny indostrian'ny semiconductor sy ny masoandro dia efa nanaporofo ny fahombiazany imbetsaka.
Afaka manamboatra milina granita isan-karazany izahay ho an'ny fitaovana Semiconductor.
Granite Surface Plate misy metaly T slot
Ity takelaka Granite Surface miaraka amin'ny T solts ity dia vita amin'ny granita mainty sy metaly t slots.Azontsika atao ny manamboatra ity takelaka granita ity miaraka amin'ny takelaka metaly t sy ny takelaka granita miaraka amin'ny t slot.
Afaka mametaka slot metaly amin'ny fototra granita mazava tsara isika ary manamboatra slot amin'ny fototra granita mazava tsara.
Fandrian'ny milina granita
Fandrian'ny milina granita, antsoina koa hoe base milina granita, fototra granita, latabatra granita, fandriana milina, base granita mazava tsara ..
Izy io dia vita amin'ny Black Granite, izay afaka mitazona mazava tsara mandritra ny fotoana maharitra.Maro ny milina misafidy granita mazava tsara.izahay dia afaka manamboatra granita mazava tsara ho an'ny hetsika mavitrika, granita mazava tsara ho an'ny laser, granita mazava tsara ho an'ny motera linear, granita mazava tsara ho an'ny ndt, granita mazava ho an'ny semiconductor, granita mazava tsara ho an'ny CNC, granita mazava ho an'ny xray, granita mazava ho an'ny indostria ct, granita mazava tsara ho an'ny smt , aerospace granita mazava tsara…
Stainless Steel Universal Joint, Precision Granite Square Ruler, Precision Granite Cube, Kodiaran'ny horonam-boky mitsivalana, Plate fandrefesana granita, Precision Granite,